စကြနောက်ကြမယ်... - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages - 1
ဗိုင်းရက်စ် အတုရေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စကြရအောင်..
LOL=msgbox("The virus have beeb detecten! Press YES to format your hard disc now, or press NO to format your hard disc after the system reboot", 20, "VIRUS WARNING")
start -> All programs -> Startup ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးထဲ သွားထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ နေသားတကျ ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်း ကွန်ပျူတာ စဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ .VBS ဖိုင်လေး အလုပ်လုပ်ပြီး warning စာတမ်းလေး တတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်း လန့်ဖြန်သွားလိမ့်မယ်.... :D
မှတ်ချက်... တကယ့် virus မဟုတ်ပါ။ ထိုအတွက် မည်သည့် အန်တီဗိုင်းရက်စ်နဲ့ စစ်စစ်မပေါ်နိုင်ပါ။ ကွန်ပျူတာအတွက် မည်သည့် အန္တာရာယ်မှ မရှိကြောင်း အာမခံပါတယ်။
ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်တော့ Startup ထဲက .vbs ဖိုင်လေးကို ပြန်ထုတ်လိုက်ရုံ၊ ဒါမှမဟုတ် delete လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
just for knowledge!!
မိမိပျော်ရွှင်မှုအတွက် သူတပါ စိတ်အကြီးအကျယ် ဆင်းရဲအောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ yeman အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
frogfish, g00gle, thureinsoe
ပြန်စာ - စကြနောက်ကြမယ်...
ဒီကောက်ကကြတော့ fake virus (အန္တာရာယ်မရှိဘူး။)
ဒါပေမဲ့ antivirus က သိတယ်။ အပေါ်က ကုတ်ကို ကြိုက်တဲ့ ဖိုင်တိုက်နဲ့ သိမ်း။ .txt, .exe , .com ကြိုက်တာနဲ့ သိမ်းပါ။ အပေါ်က ဟာလေးနဲ့သာ ပေါင်းရေးလိုက်လို့ ကတော့ အစ ခံရတဲ့လူ နေရာမှာတင် ချက်ချင်းမေ့သွားနိုင်တယ်။ :P
မှတ်ချက် - ပညာရှင်များကို မဆိုလိုပါ။
မိမိပျော်ရွှင်မှုအတွက် သူတပါး စိတ်အကြီးအကျယ် ဆင်းရဲအောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့....
frogfish, g00gle, zayyarmg
Registry ကနေ စနည်းနဲ့ အားဖြည့်လိုက်ပါတယ်
Regedit--->HKEY_LOCAL_MACHINE-->Software--->Windows-->Current Version--->Policies--->System ထိရောက်အောင် သွား System ကို click လိုက်တာနဲ့ ညာဘက်နေရာမှာ
စာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ် Legalnoticecaption ကို Right click ထောက် Modify ကိုရွေး value နေရာမှာ
ရေးချင်တဲ့ data ကိုရေး ဥပမာ " Your sysytem infected "
အောက်စာကြောင်း legalnoticetext ကိုထပ်ရွေး right click -->Modify--value မှာစာတစ်ခုခုထည့်
ဥပမာ - " Virus seriously hurm your computer " လို့ရေး ပြီး Ok ပေး Restart ချ ရဲမာန်ပြောသလို မျက်လုံး ပြူး မပြူး သိချင်ကြရင်တော့ စမ်းကြည့်ကြပေတော့ဗျို့ ကွန်ပျူတာကိုတော့ ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေခြင်း
မရှိပါဘူး စနောက် ရုံသက်သက်ပါပဲ ပြန်ဖျက်ချင်ရင် ခုဏက စာတွေ ကိုဖျက်ပြီး Restart ဆင်းရင် ရပါပြီ
ရဲမာန်ပြောထားတဲ့ Vbs code ကတော့ Message box အမျိုးအစား နံပါတ် ၃ ပါ Yes or no
ပေါ့ Retry ,cancel, Always stays top of the Desktop စတာတွေ လုပ်ချင်ရင်တော့
အောက်ကနေရာလေးမှာ Message Box အမျိုးအစားများကို ကျွန်တော် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်
Last edited by ကိုဖြိုးငြိမ်း; 28-09-2008 at 11:59 PM..
28-10-2008, 01:28 AM
ပို့စ် 70 ခုအတွက် 357 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
In cmd, type below code
MSG * Do you want to delete this message?
and double click on it, it will appear many cmd windows........
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ အကြော်ဆရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, frogfish, g00gle, zayyarmg
Find More Posts by အကြော်ဆရာ
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်လေး ပျင်းတာနဲ့ အွန်းလိုင်က သူငယ်ချင်းတွေကို စချပါတယ်။ အဲဒီလိုစတဲ့နေရာမှာ ကောင်းမလေး ပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို စရတာ အရသာ ပိုရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ Bat ဖိုင်လေး လုပ်ပြီ Shut Down ကျစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Create Short Cut နဲ့ လုပ်တာတော့ အတော်များများလုပ်တက်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Notepad ထဲမှာ စာလေး ၄ ကြောင်းလောက်ရေးပြီ Bat ဖိုင်တည်ဆောက်ပြီ Shut Down ကျစေတာဖြစ်ပါတယ်။
1. Start မှ Run ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
2. Notepad လို့ ရိုက်ထည့်ပြီ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။အောက်က စာလေးတွေကို copy ကူးပြီ Notepad ထဲထည့်လိုက်ပါ။
3.File ကနေ save as ကို click ပြီshutdown.bat လို့ ရေးပြီ Save လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီ၇င် သူငယ်ချင်းဆီကိုပို့လိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်း Open တာနဲ့ ကွန်ပျူတာ Shut Down ကျပါလိမ့်မည်။
Last edited by thureinsoe; 09-12-2010 at 04:21 PM..
ကျွန်တော် အခုတင်ပြတာတွေက သူတစ်ပါးကို နှောက်ယှက်စေချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းများကို သိထားရုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှတော့ လက်တည့် မစမ်းပါနဲ့နော်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ Keyboard ကို hack တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ မထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါလေးကို Run လိုက်ရင်တော့ keyboard နဲ့ စာရိုက်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ. ကျွန်တော် မပြောတော့ဘူး။ ( သူတစ်ပါးကို မစစေချင်ပါ.)
2. Notepad လို့ရိုက်ပြီ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။အောက်က စာတန်လေးကို copy ကူပြီ Notepad ထဲထည့်ပြီ Fool.vbs လို့ save လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်း စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
Last edited by thureinsoe; 09-12-2010 at 04:26 PM..
အဆိပ်ပြင်းတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း notepad ပေါ်မှာ ကူးထည့်ပြီး .bat ဖိုင်နဲ့သိမ်း။
ရောင်ရမ်းပြီး နှိပ်မိရင်တော့ restart ချလိုက်မှပဲ အဆင်ပြေမဲ့ကောင်။
bat ဖိုင်လေးတွေရေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စလိုက်ကြရအောင်…
echo You have been hacked your computer
echo Now I will shutodown your computer
shutdown -s -t 60 -c “U HAVE BEEN HACK!! NOW I will shutodown your computer @_@”
အပေါ်က ကုဒ်လေးကို notepad ပေါ်ရေးပြီး နှစ်သက်ရာ အမည်နဲ့ .bat ဖိုင်လို့ ရေးပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။ အနီရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် နှစ်သက်ရာ ရေးသားနိုင်ပါသည်။ start cmd.exe ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုတော့ ကြိုက်သလောက်ရေးထည့်နိုင်ပါသည်။ များလေ ကောင်းလေ…
Virus အစစ်မဟုတ်ပါ။ စရုံနောက်ရုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်မလဲ သိချင်ရင်တော့ စမ်းကြည့်ကြည့်
ဒီကောင်လေးကို ပြန်ဖျတ်ချင်ရင်တော့ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း run box ကနေ shutdown -a ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခု ပိုရေးထားတာကတော့ cmd ဖိုင်တွေ အများကြီးတတ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကိုတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လိုက်ပိတ်ရလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက shutdown -s -t 60 -c မှာ 60 က စက္ကန့်ကို ပြောတာပါ။ start cmd.exe စာကြောင်း ထည့်သလောက် ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကို ညှိထည့်ပေးလိုက်ပါ။
စွမ်းကမ္ဘာ, ကြည်နိုင်, frogfish, g00gle
အစ်ကို တို့တွေပေးထားတဲ့နည်းတွေက မိုက်တယ်။ သူများတွေကို စလို့ရပြီ ဟီဟီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။